Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Niverina indray ny fampisehoana Benny Hill vaovao
Ny momba an'i Beadle - ny fampisehoana fakan-tsary miafina miverina amin'ny lalana
Hiverina amin'ny fahitalavitra manomboka anio alina ny Seho Benny Hill sy ny fahitalavitra ankafiziny hafa taloha Izany no TV Krismasy, fantsona nostalgia mandefa ny vanim-potoana Krismasy amin'ny Freeview, Freesat, ary Sky.
miaraka Benny Hill, ny fantsona dia hanatitra sakafo amin'ny fety avy amin'ny fandaharam-potoana taloha anisan'izany Beadle's About ary fahitalavitra Krismasy manokana avy amin'ny Kenny Everett, Mike Yarwood, Tommy Cooper ary ny Tohizo hatrany ekipa.
Izany no TV Krismasy dia ny fanavaozana ara-potoana ho an'ny TV Gold izany, ilay fantsona fahitalavitra arsiva mandefa manerana an'i Angletera amin'ny fantsona Freeview 91, fantsona Sky 187 ary fantsona Freesat 178. Ny fandaharana Krismasy amin'ny fahitalavitra Many That's TV dia ho hita ao amin'ny tambajotram-pahitalavitra an-toerana an'ny That's TV izay hita any amin'ny faritra 20 any UK amin'ny fantsona Freeview 7. na 8.
Ny ora voalohany amin'ny Krismasy That's TV anio (Alakamisy 18 Novambra 2021) amin'ny 9 ora alina dia faktiora avo roa heny The Benny Hill Show.
Ny fampisehoana hafa amin'ny herinandro ho avy dia ahitana Beadle's About, ilay fampisehoana fakan-tsary miafina nasehon'ny prankster Jeremy Beadle, izay nanomboka tamin'ny 1986 nandritra ny 20 taona ka nahatonga azy io ho fampisehoana fakan-tsary miafina maharitra maharitra indrindra eran-tany. Na ny The Benny Hill Show na ny Beadle's About dia tsy nalefan'ny fahitalavitra rehetra tany UK nandritra ny 19 taona.
Benny Hill dia napetraka ho mahery fo amin'ny mpanao hatsikana maoderina maro, anisan'izany ny kintan'ny fahitalavitra sy ny mpanoratra David walliams izay nangataka azy bebe kokoa tamin'ny fahitalavitra, nilaza tao amin'ny Twitter tamin'ny 2017: “Enga anie mba hankalazaina bebe kokoa amin'ny fahitalavitra i Benny Hill“. mpanao hatsikana Tim Vine of Tsy Hivoaka Nilaza ny laza fa nitazona ny kasety VHS taloha rehetra nataon'i Benny Hill hoe: "Tsy leo mihitsy aho, ary heveriko fa tena ambany be izy. "
Ny tara Caroline Aherne, mpanoratra sitcom Ny fianakavian'ny Royale, nilaza tamin'ny fanadihadiana iray tao amin'ny Channel 4 tamin'ny 1998: “Tena tiako i Benny Hill", raha mpanao hatsikana Ben Miller of Armstrong sy Miller naneho hevitra ny laza hoe: “Ny asa voalohany nataony dia nipoitra. Izy no mpanao hatsikana mahomby indrindra amin'ny sehatra maneran-tany izay novokarin'i Grande-Bretagne. "
Benny Hill dia endri-javatra voalohany tamin'ny fahitalavitra britanika nandritra ny efa-polo taona, voalohany tao amin'ny BBC ary avy eo tao amin'ny ITV izay nandehanany nandritra ny 20 taona fanampiny ka hatramin'ny 1989. Tamin'ny haavony dia betsaka kokoa ny Britanika nihaona tamin'i Benny Hill noho ny nijery ilay sarimihetsika. moon landing ary nahazo ny loka voalohany tamin'ny 1954 izy rehefa voafidy ho TV Personality of the Year. Ny Benny Hill Show dia nahazo mari-pankasitrahana 11 nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny ITV ary naondrana tany amin'ny firenena 140 mahery ny sehony. Saingy ireo klasika britanika ireo, ny zo izay fehezin'ny Estate sy Thames TV, dia tsy nahazo alalana tamin'ny fampielezam-peo UK efa ho 20 taona.
Miova izany anio alina rehefa manomboka ny Krismasy That's TV mandritra ny 7 herinandro hafa miaraka amin'ny vanim-potoana manokana an'i Benny Hill.
Izany no TV Christmas Head of Programming, Kris Vaiksalu, dia nilaza hoe: “Faly izahay nahazo ny zo amin'ireo seho roa lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny fahitalavitra anglisy, The Benny Hill Show sy Beadle's About, ho an'ny fanavaozana ara-potoanay amin'ity taona ity. Tafiditra ao anatin’ny vakoka kolontsaina nasionaly ireo seho ireo. Ny fijerena hatsikana efa hatry ny ela dia fombam-pirenena Krismasy saingy nandritra ny roapolo taona dia tsy hita tamin'ny fety ireo ankafizina manokana ireo.
"Mila firavoravoana fety isika rehetra taorian'ny taona lasa. Nanotrona anay tamin'ny fangatahana hanehoana an'i Benny Hill ireo mpijery anay ary faly izahay fa afaka manatanteraka ity firarian-tsoa Krismasy ity. Saingy betsaka kokoa ny crackers ao amin'ny That's TV Christmas. Nalahatra ny Krismasy TV nostalgia-fest miaraka amin'ireo anarana malaza indrindra amin'ny fahitalavitra sy mozika nandritra ny efapolo taona lasa. Kendrenay ny hanome fotoana Krismasy manokana ho an'ny mpijery feno fahatsiarovana mahagaga. Tandremo tsara ianao… satria i Benny Hill sy Jeremy Beadle dia miverina amin'ny televizionao amin'ity Krismasy ity!"
Tamin'ny taon-dasa, ny marika Krismasy That's TV dia nahasarika mpijery mihoatra ny 4.4 tapitrisa tao anatin'ny efatra herinandro ka hatramin'ny 27 Desambra 2020 (loharano: BARB). Ny fantsona izao dia nanitatra ny fandrakofany ary hita manerana an'i UK amin'ny Sky sy Freesat ary koa Freeview.
That's TV dia hampiseho hafatra eo amin'ny efijery izay mampisarika ny sain'ny mpijery fa ny sasany amin'ireo votoaty aseho amin'ny fandaharana dia maneho ny fenitry ny fotoana namoronana ny fampisehoana tany am-boalohany.
Ny sakafo Krismasy aseho ao amin'ny That's TV Christmas dia ahitana:
The Benny Hill Show - fifantenana ny 20 taona nataon'i Benny Hill tao amin'ny Thames TV 1969 hatramin'ny 1989
Beadle's About - ny fampisehoana fakan-tsary miafina ny asabotsy alina izay fototry ny fandaharam-potoanan'ny ITV nanomboka tamin'ny 1986 ka hatramin'ny 1996
Tohizo ny Krismasy - Krismasy manokana efatra sauce avy amin'ny ekipa Carry On natao tamin'ny 1969, 1970, 1972 ary 1973
Mike Yarwood Krismasy manokana – ilay impresionista sy mpanao hatsikana no fototr'ireo fandaharam-pahitalavitra Krismasy nandritra ny '70s sy '80s. That's TV Christmas dia niantoka ny zon'ny fandaharana Krismasy manokana nanomboka tamin'ny 1982, 1984 ary 1985.
Kenny Everett's New Year Specials- Taom-baovao manokana an'ny mpanao hatsikana madcap nanomboka tamin'ny 1978, 1979 ary 1980 miaraka amin'ireo kintana vahiny malaza ao anatin'izany Rod Stewart, Cliff Richard, David Bowie, David Essex, Billy Connolly, Bob Geldof ary Ny Sex Pistols. Ankoatra izany, ho fitsaboana fanampiny ho an'ny mpankafy Kenny Izany no TV Krismasy dia hampiseho fandaharana manokana natao tamin'ny famoahana horonan-tsary tany am-boalohany ary tsy naseho tamin'ny fahitalavitra navoakan'ny namana anisan'izany Cleo Rocos ary ny tara Lionel Blair
Tommy Cooper - fifantenana manokana avy amin'i Tommy Cooper tokana, tompon'ny majika mifangaro
MOZIKA, KANTO ARY DOKUMENTARY
Pavarotti: Krismasy manokana - Ny tenor malaza dia manao klasika amin'ny fialantsasatra amin'ity fandaharana ity ao amin'ny Katedraly Notre Dame any Montréal, miaraka amin'ny amboarampeo ankizilahy, Les Petits Chanteur du Mont-Royal, ary antoko mpihira lehibe iray, Les Disciples de Massenet (1978)
Irish Tenor Trio: Tantara Krismasy mahazatra - fifangaroan'ny hira Krismasy nentim-paharazana sy hira irlandey tanterahan'ny Irish Tenor Trio
100% Krismasy Hits – Hiakatra Krismasy manara-penitra nanomboka tamin'ny taona 60 ka hatramin'izao
Vanim-potoanan'ny fanadihadiana momba ireo olona malaza sy zava-nitranga tamin'ny taonjato farany, anisan'izany ny Punk 70 tany Londres, Princess Diana, John Lennon, King George VI, Margaret Thatcher, David Bowie aryMichael Rockefeller
Aorian'ny fanavaozana ny marika Krismasy That's TV dia hiverina amin'ny fandaharam-potoana vaovao amin'ny 4 Janoary 2022.
MOMBA NY BENNY HILL SHOW
The Benny Hill Show dia andian-tsarimihetsika britanika burlesque amin'ny endrika Vaudeville noforonin'ny mpilalao anglisy anglisy Benny Hill izay nandeha tamin'ny 23 Desambra 1962 ka hatramin'ny 26 Desambra 1968 tao amin'ny BBC ary nanomboka tamin'ny 19 Desambra 1969 hatramin'ny 1 Mey 1989 tao amin'ny ITV.
Benny Hill dia teraka Alfred Hall tamin'ny 1925 tao Southampton ary tsaroan'ny fianakaviana sy ny mpiara-mianatra ho 'clown kilasy'. Fony izy zatovo dia niala tamin’ny fianarany ary niasa toy ny mpanao ronono izy talohan’ny nanompoany tao amin’ny Tafika Britanika nandritra ny Ady Lehibe II. Nandritra izany fotoana izany dia nampiala voly ny miaramila tamin'ny seho isan-karazany izy ary nandray ny anaran'ny sehatra, Benny Hill, ho fanomezam-boninahitra an'i Jack Benny mpanao hatsikana. Taorian'ny ady dia nanao fampisehoana tao amin'ny efitrano mozika London i Hill ary nahazo ny fiatoana tamin'ny fahitalavitra taorian'ny fampitahana ny fandaharana fialamboly BBC. Nalaza eran'izao tontolo izao ny sehony tamin'ny taona 70, nahazoany Thames TV £26 tapitrisa tamin'ny varotra. Maty tany Londres i Hill tamin'ny 1992 teo amin'ny faha-68 taonany, roa volana taorian'ny niharan'ny aretim-po.
Rehefa maty i Hill, dia hoy ilay mpilalao sarimihetsika amerikana Jack Lemmon: “Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny mpanao hatsikana ankafiziko indrindra indrindra dia i Benny Hill, izay nahay tamin'ny sehatra nisy azy. Ny ankamaroan'ny mpanao hatsikana dia manatitra vovobony marobe; Nitifitra tafondro i Benny. "
MOMBA NY BEADLE'S ABOUT
Beadle's About nihazakazaka tao amin'ny ITV nanomboka tamin'ny 1986 ka hatramin'ny 1996 natolotry ny mpanao vazivazy azo ampiharina, Jeremy Beadle. Hilalao hetsi-panoherana sy hafetsena amin'ny vahoaka tsy miahiahy izay noraketina an-tsokosoko tamin'ny fakan-tsary miafina ilay seho. Beadle dia nomena ny demokrasia amin'ny fahitalavitra, mametraka ny olona tena izy ho ivon'ny sehony. Ny kintana dia mpanohana lehibe ny Ankizy voan'ny Leukemia ary nanangona maherin'ny 100 tapitrisa dolara ho an'ny fiantrana, nahazoany MBE tamin'ny 2001. Maty noho ny pnemonia i Beadle tamin'ny taona 2008 teo amin'ny faha-59 taonany.
MOMBA NY KENNY EVERETT
Maurice Cole, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Kenny Everett, dia mpanao hatsikana anglisy ary jockey kapila radio. Taorian'ny ody tamin'ny radio piraty, izy no iray amin'ireo DJ voalohany nanatevin-daharana ny Radio 1 vao navoakan'ny BBC tamin'ny 1967. Nanatevin-daharana ny Radio Renivohitra tany Londres i Everett taorian'ny noroahin'ny BBC tamin'ny 1970 noho ny fanamarihana momba ny vadin'ny minisitry ny governemanta. Everett dia mpinamana tamin'ny olo-malaza anisan'izany i Freddie Mercury, ilay mpihira ny Queen, izay nihaona tamin'ny fampisehoana ny Capital Radio Breakfast Show tamin'ny 1974.
Tany amin'ny faramparan'ireo taona 70, i Everett dia nitondra ny radio sy ny jingles zany tamin'ny fahitalavitra nanao andiany efatra ho an'ny ITV (Thames) talohan'ny nalain'ny BBC1. Nalaza tamin'ny fampisehoana dihy nataon'ny tarika mpanao fampisehoana, Hot Gossip, izay notarihin'i Arlene Phillips, izay lasa Dame ary lasa iray tamin'ireo mpitsara voalohany tao amin'ny Strictly Come Dancing ny fandaharana ITV. Hivoaka amin'ny That's TV Christmas avokoa ireo seho Thames ahitana ny Hot Gossip an'i Arlene Phillips, anisan'izany ny taom-baovao malaza.
Ilay mpanao hatsikana Michael McIntyre dia nanoritsoritra an'i Kenny Everett ho "Dada hafa" noho ny fisakaizan'ny ray aman-dreniny sy ilay kintana. Ny rain'i McIntyre dia mpanoratra tantara ao amin'ny seho Kenny Everett.
Maty tamin’ny 1995 i Everett, tamin’izy 50 taona.
MOMBA NY TARIKA TV IZANY
Izany no TV Krismasy (izay hiseho ho “That's TV Xmas” amin'ny ankamaroan'ny fahitalavitra) dia tantanan'ny That's TV, ao anatin'ny vondrona That's Media.
Izany TV izany dia mitantana serivisy fahitalavitra 20 eo an-toerana ary fantsona nasionalin'ny UK antsoina hoe TV Gold izany, izay rehetra rebranding ho Izany no TV Krismasy manomboka ny 18 Novambra 2021 hatramin'ny 4 Janoary 2022.
Izany no serivisy fahitalavitra ao an-toerana (fantsona Freeview 7/8) manompo trano maherin'ny dimy tapitrisa any amin'ny conurbations 20 any UK. Izany TV izany dia manome vaovao sy vaovao mifantoka eo an-toerana ho an'ny toerana tsirairay miaraka amin'ny fandaharana amin'ny tamba-jotra 'hazondamosina' ahitana mozika nostalgia, fialamboly ary fanadihadiana.
Izany no fantsona nasionalin'ny fahitalavitra UK natomboka tamin'ny Jolay 2021 ary efa misy manerana an'i UK izao ao amin'ny fantsona Freeview 91, fantsona Sky 187 ary fantsona Freesat 178. TV Gold izany hatramin'ny 18 Novambra 2021, dia ny 'Home of Nostalgia' ary manolotra hatsikana, mozika ary fialamboly ary fanadihadiana momba ny olona sy ny zava-nitranga tamin'ny taonjato farany.
Ao anatin'ny sata mifehy ny andraikitra ara-tsosialy, ny That's TV dia eken'ny Living Wage Foundation ho mpampiasa karama tena izy.